एसपीपी विवादमा संसदीय समितिमा कडा सवाल जवाफ, भिडियोमा हेर्नुहोस् | Ratopati
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक
एसपीपी विवादमा संसदीय समितिमा कडा सवाल जवाफ, भिडियोमा हेर्नुहोस्
अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) सम्झौताका विषयमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार छलफल भएको छ । समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सांसदहरुले एसपीपीका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई प्रश्न गर्दै यसबारे धारणा मागेका थिए । उनीहरुले एसपीपी सम्झौता देशको हितमा नरहेको समेत जिकिर गरेका थिए । सो सम्बन्धमा जवाफ दिँदै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकालाई पत्र लेखेको साँचो भएको तर सैन्य समझदारीका लागि नभएको बताए ।
शर्माले उक्त पत्र भूकम्पको बेला २७ देशका सैनिक आएको र उनीहरूलाई नै सम्बोधन गरेर लेखेको प्रस्ट्याएका हुन् । त्यसमा उनले सैन्य समझदारी गर्ने कुनै कुरा नलेखेको जानकारी दिँदै पछि २ वटा पत्र पनि लेखेको बताए । ‘अमेरिकाको एउटा राज्यले नेपालको प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहायता ल्याउने हिसाबले लेखिएको पत्र हो । पत्र नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति बिपरित लेखिएको छैन’, सेनाप्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी सम्झौताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताए । उनले भने, ‘एसपीपी नेपाललाई स्वीकार्य छैन । नेपाली सेनाको विज्ञप्ति आइसकेको छ । यो अगाडि बढ्दैन ।’ अब एसपीपीलाई धेरै उचाल्न आवश्यक नभएको पनि उनले बताए । ​
एसपीपी सम्झौताको 'च्याप्टर क्लोज' भइसक्यो : परराष्ट्रमन्त्री खड्का
एसपीपी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन भीम रावलको माग
प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न - अमेरिकालाई पत्र लेख्न स्वीकृति कसले दियो ?
स्थानीय तह निर्वाचन : मतगणना विशेष (लाइभ)
नेतृत्वसँग के अपेक्षा लिएर काठमाडौं आएका छन् एमालेका जनप्रतिनिधि ? (भिडियोसहित)
रातोपाटी नवशक्ति : मिर्मिरेमै पहिलो पाइलादेखि नौलाख भन्दाबढी पाठकसम्म
प्रशिक्षणबाट के ऊर्जा लिएर फर्किँदैछन् माओवादी प्रतिनिधि ? (Live)
संसद्‍मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै ( LIVE)
रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्राबारे घोषणा कार्यक्रम ||LIVE||